Izimo Zobuchwepheshe Zokukhiqiza Izindandatho Ezinhle Zokunikela
Ngabe amasongo wokuthinta abhekisele kuphi? Indandatho ethwele isho ipayipi lensimbi elingenamthungo eligoqeka ngokushisayo noma eligoqwe ngamakhaza (elibandayo) ngokukhiqiza iringi ejwayelekile yokuthwala. Ububanzi bangaphandle bepayipi lensimbi bungu-25-180mm, futhi ubukhulu bodonga bungu-3.5-20mm, obungahlukaniswa phakathi ...
Ngabe amabombo angenawo u-oyela awadingi ngempela uwoyela wokuthambisa?
Amabheringi angenawo uwoyela uhlobo olusha lwamabheringi agcotshisiwe, anezici zamabhere wensimbi namabhere angenawo uwoyela. Ifakwe i-matrix yensimbi futhi igcotshwe ngezinto ezikhethekile zokugcoba eziqinile. Inezici zokuthwala okuphezulu, ukumelana nomthelela, i-temperatu ephezulu ...
Uyazi ukuthi yiziphi izingxenye zemishini ezinamabheringi? Zibizwa ngokuthi “ukudla kwemboni yemishini” futhi zisetshenziswa kabanzi ezingxenyeni ezahlukahlukene ezibalulekile zemishini. Ngoba lezi zingxenye ezibalulekile zisebenza endaweni engabonakali, imvamisa aziqondakali ngabangewona ochwepheshe. Okuningi okungewona umshini ...